I-TrendSpottr: Shintsha Umsindo Womphakathi Uwenze Izimpawu Zokuqala Ezisebenzayo Martech Zone
NgoLwesibili, Januwari 13, 2015 Douglas Karr
Ngaphambi kokuvelela kwezokuxhumana, bekukhona inkampani enakekela utshani eyayiqopha zonke izingcingo zayo zamakhasimende futhi izihlukanise ngesihloko. Uhlelo luphenduke injini yokuthengisa ngoba bebekwazi ukubona, ngokwendawo, izingqinamba ebeziqhamuka esifundeni bese bethumela ama-imeyili agxile kakhulu ngokuya ngezihloko ezihamba phambili. Abathandi bokunakekela utshani babebona isexwayiso bese beyothenga ikhambi elifanele esitolo - kwesinye isikhathi benesigqebhezana sokubakhuthaza.
Ukuthrendela kuyithuba elingakholeki lamabhizinisi amaningi kepha abanye abantu abazilandeli izimpawu ezingashayela ngempumelelo imiphumela yebhizinisi. Kungaba yisimo sezulu, ezezimali, ezempilo, noma esinye isihloko esihlobene nesithinta ukuthengisa. I-TrendSpottr isiza ukuguqula umsindo weSocial Media ube amasignali okuqala angasebenza.
I-TrendSpottr isibikezelo esisekelwe efwini analytics inkampani ekhomba futhi ibikezele ukuthambekela ngesikhathi sangempela kusuka ekusakazweni kwedatha enkulu, kufaka phakathi kusuka ku-Twitter naku-Facebook. Insizakalo yeTrendSpottr ivumela amakhasimende ethu nabalingani bethu ukuthi "bahambe phambili kwejika" ngokukhomba izindaba ezivelayo, imicimbi, nabathonya abanamandla amakhulu egciwane kanye nomthelela emakethe.
Amagumbi ezindaba, abashicileli, ama-ejensi e-PR, imikhiqizo, izinhlangano zikahulumeni, abathengisi bedijithali, abasebenzisi bezokuxhumana nabantu, abathengisi bamasheya kanye nezikhungo zezezimali konke kubeka iTrendspottr ukuthi isetshenziselwe ukutholakala kwezindaba zegciwane, ukuqashelwa komkhiqizo nedumela, ukuphathwa kwezinhlekelele, ukumaketha kokuqukethwe nokubikezela imakethe.
I-Trendspottr ibuye ihlangane nakho kokubili Salesforce njengoRadian6 Buddy Media Social Studio Partner kanyeI-Hootsuite . Basanda kwethula I-TrendSpottr ye-Instagram kuI-Hootsuite kanjalo!
Thola okuningi ngeTrendSpottr kanye namandla ethu okubikezela izitayela zesikhathi sangempela kusuka kudatha enkulu ngokuzama imikhiqizo yabo: Isiginali yeTrendSpottr, Izaziso zeTrendSpottr futhi Umjaho weTrendSpottr.
I-TrendSpottr futhi inikeza usesho, isexwayiso kanye namathrendi we-JSON API!
Tags: izexwayiso apiidatha enkuluFacebookGoogle +instagramLinkedInsesha ezinkundleni zokuxhumanasocial mediaizexwayiso zokuxhumana nabantuezokuxhum izexwayiso apizokuxhumana apiizitayela zokuxhumana nabantuizitayela zokuxhumana nabantu apiezihamba phambiliizitayelaiziteketTwitter